जिमेलमा सुरक्षित रहने तरिका- हेलो शुक्रबार - कान्तिपुर समाचार
जिमेलमा सुरक्षित रहने तरिका
असार २९, २०७५ कान्तिपुर संवाददाता
काठमाडौँ — गत साता अन्य कम्पनीहरूले जिमेल प्रयोगकर्ताको इमेल पढ्न सक्छन् भन्ने खबरले तरंग ल्यायो । वाल स्ट्रिट जर्नलले प्रकाशित गरेको समाचारमा जिमेलबाहेक अन्य कम्पनीका डेभलपरहरूले प्रयोगकर्ताको इमेल पढ्न सक्ने दाबी गरिएको थियो ।
उक्त दाबी सार्वजनिक भएपछि जिमेल असुरक्षित रहेको चर्चा व्याप्त भयो । अन्य कम्पनीका एल्गोरिदमले मात्रै नभई मानिसले नै इमेल पढ्न सक्ने दाबी गरिएकाले यसले गोपनीयता भंग हुने डर पनि फैलियो ।
प्रयोगकर्तालाई आफ्नो इमेल अरूले पढ्लान् भन्ने डर छ भने उनीहरूले सामान्य सुरक्षा अपनाएर यसलाई रोक्न सक्छन् ।
यसका लागि आफ्नो जिमेल एकाउन्टको दायाँपट्टि माथिल्लो भागमा रहेको प्रोफाइल पिक्चरमा क्लिक गरी गुगल एकाउन्टमा जानुपर्छ । अब खुल्ने नयाँ पेजमा प्रयोगकर्ताले विभिन्न थरी अप्सन देख्न सक्छन् ।
त्यहाँ सुरुमै रहेको साइन इन एन्ड सेक्युरिटी शीर्षकको तल रहेको एप्स विथ एकाउन्ट अप्सनमा गएर प्रयोगकर्ताले आफ्नो जिमेलमा पहुँच पाएका अन्य एपहरूलाई हटाउन सक्छन् ।
कुन–कुन आफ्नो जिमेलमा पहुँच पाएका छन् भन्ने प्रयोगकर्ताले देख्न सक्छन् । त्यहाँ रहेका एपमा क्लिक गरी रिभोक एक्सेस गरी उक्त एप्लाई आफ्नो एकाउन्टमा पहुँच बनाउनबाट रोक्न सकिन्छ ।
प्रकाशित : असार २९, २०७५ १०:५३
नथाक्ने मान्छे कस्तो होला ?
असार २९, २०७५ हेलो शुक्रबार
काठमाडौँ — मानिस दिनभरि दौडिँदा पनि थाकेन भने के हुन्छ ? वा जति घण्टा काम गर्दा पनि शरीर गलेन भने नि ? यो यस्तै परिकल्पनाका साथ म्यासाचुसेट्स युनिभर्सिटीका अनुसन्धानकर्ताहरूले मानव कंकालजस्तो देखिने नयाँ आवरण बनाइरहेका छन् जसलाई नाम दिइएको छ– एक्सोस्केलेटन ।
यो मानिसको शरीरको बाहिरी भागमा बस्ने आवरण हो जसले मानिसलाई बाहिरी चोटबाट बचाउनुका साथै उनीहरूको जैविक क्षमतामा वृद्धि गर्ने दाबी गरिएको छ ।
यसले मानिसको शरीरलाई थाक्नबाट बचाउने अनुसन्धानमा संलग्नहरू बताउँछन् । म्यासचुसेट्स यूनिभर्सिटीको बायोमेकाट्रोनिक्स ल्याबका अनुसन्धानकर्ताहरूले विकास गरेको यो आवरण, उनीहरूको भाषामा, नसा सन्निहीत डिजाइन सीपद्धारा तयार पारिएको बताइएको छ । यसले मानिसको शरीरको क्षमता बढ्नेछ ।
यो आवरण तयार पार्नका लागि अनुसन्धानरत उनीहरूले आफ्नो ल्याबमा मानिसले हिँड्दा वा दौडँदा कति शक्ति प्रयोग गर्छन् भन्ने जाँच्नका लागि ट्रेड मिलमा डिभाइस राखेर परीक्षण गरिरहेका छन् भने मानिसको जोर्नी र मांसपेशीको स्वरूप कस्तो हुन्छ भन्ने परीक्षणका लागि गतिशील क्यामेरा जडान गरेका छन् । यसबाट आउने तथ्यांकले आफूहरूलाई मानिसलाई अझ्न प्रभावकारी हिँड्न र दौडन सघाउने प्रणाली बनाउन सहायता पुग्ने उनीहरूको विश्वास छ ।
सामान्य मानिसलाई पनि ‘सुपर ह्युमन’ जस्तो बनाउन सक्ने यो आवरणको डिजाइन निर्माणमा संलग्न विश्वविद्यालयका विद्यार्थी टेलर क्लिटेसले अघिल्लो वर्ष नथाकी पियानो बजाउन मिल्ने मानिसको औंलाजस्तो डिभाइस बनाएका थिए ।
यसको निर्भीक नेतृत्वकर्ता हुन्– प्राध्यापक हुग हेर । उनी आफूलाई ‘बायोनिक म्यान’ भनी चिनाउन रुचाउँछन् किनकि उनी आफ्ना अप्राकृतिक खुट्टाको सहारामा हिँडडुल गर्छन् । किशोरावस्थामा दुवै हिमाली यात्राका क्रममा दुर्घटनामा परी दुवै खुट्टा गुमाएका उनी अहिले आफ्ना अनुसन्धान समूहले बनाइदिएको ‘हाइटेक’ खुट्टा लिएर यसको नेतृत्व गरिरहेका छन् ।
मानिसलाई असीमित शक्ति दिने यो आइडिया जति नयाँ र रोचक छ, उति नै घातक पनि हुन सक्छ । फाउन्डेसन फर रेस्पोन्सिबल रोबोटिक्सका सहसंस्थापक अर्का प्राध्यापक नोयल सार्के यो सोचप्रति चिन्ता व्यक्त गर्छन् ।
‘बरु यस्ता प्रविधिलाई धेरै मिहिनेत पर्ने कामका लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ तर मानिसलाई जति काम गर्दा पनि नथाक्ने बनाउँदा मानिस शारीरिक रूपमा नथाके पनि मानसिक रूपमा भने थाकिरहेको हुन्छ र मानसिक थकान मेटाउने कुनै उपाय हुन्न,’ उनको चिन्ता छ ।
‘यस्तो खालको प्रणाली बनाएर यसको दुरुपयोग नहोस् भन्नुभन्दा बनाउँदादेखि नै यसको नैतिक रूपमा प्रस्ट हुनुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘बरु ६ घण्टा काम गरेपछि स्वत: बन्द हुने खालको प्रणाली बनाऔं ।’
तर, यो आवरण बनाउन संलग्नमध्ये एक क्लिटेस प्रविधिलाई सीमित राख्नु हुन्न भन्ने धारणा राख्छन् । उनी भन्छन्, ‘कसैले रक्सी खाएर चलाउँछ भन्ने डरले हामी कार बनाउन रोक्न सक्दैनौं ।’
एक्सोस्केलेटन प्रविधि नौलो भने होइन । विभिन्न अनुसन्धान प्रतिवेदन र जर्नल लेखको आधारमा भन्ने हो भने यसको प्रयोग सन् १९६० देखि नै सैनिक प्रयोजनका लागि सुरु भएको थियो । अहिले पनि विभिन्न कम्पनीले एक्सोस्केलेटन बनाइरहेका छन् र विशेषत: उद्योगमा जोखिमपूर्ण काम गर्ने कामदारहरूले यसको प्रयोग गरिरहेका छन् ।
कार उत्पादक कम्पनी फोर्ड आफ्ना कामदारलाई एक्सोस्केलेटन प्रयोग गराउने कम्पनीमध्येको एक हो । तर, उनीहरूले प्रयोग गर्ने गरेको एक्सोस्केलेटन विद्युतीय तरंगरहित त । फोर्डसहित अन्य कम्पनीका कामदारले उद्योगमा काम गर्दा प्रयोग गर्ने एक्सोस्केलेटन विशेषत: सुरक्षाका लागि लगाइन्छ । विशेषत: गह्रांै सामान उचाल्दा ढाड वा शरीरका अंगलाई असर नगरोस् भन्नका लागि यसको प्रयोग गरिएको हो ।
तर, म्यासाचुसेट्स युनिभर्सिटीको समूहले निर्माण गर्ने भनेको एक्सोस्केलेटन अन्यभन्दा फरक छ किनकि यसले विशुद्ध बाहिरी आवरणका रूपमा मात्रै काम नगरी मानिसको नसासँग जोडिएर काम गर्ने महत्त्वाकांक्षा राखेको छ । र, यसमा संलग्न अनुसन्धानकर्ताहरूले भनेका छन्–यो यसअघि प्रयोगमा आएको एक्सोस्केलेटनजस्तो ठूलो खालको नभई अझ सानो हुनेछ ।
–बीबीसीबाट अनूदित र सम्पादित अंश